ONE OK ROCK band ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Change သီချင်းရဲ့ Music Video ကတော့ ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ June 20 ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ 1M Views ရှိသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Change ကတော့ ဒီနှစ် February လမှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ 2018 ရဲ့ New Single ဖြစ်ပါတယ်။ ONE OK ROCK ကတော့ Japan နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးဆုံး အအောင်မြင်ဆုံး Rock band တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့သား လေးယောက် ဖြစ်တဲ့ Taka,Tomoya,Toru,Ryota တို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး 2017 January မှာတော့ သူ့တို့ရဲ့ Ambition Album ကို ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တောက်လျှောက်ဆိုသလို Tour တွေ လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Ambition Album ကတော့ သူတို့ရဲ့ ရှစ်ခုမြောက် album ဖြစ်ပြီး ဒီထဲမှာ Taking off, Listen, We are စတဲ့ သီချင်းတွေအပါအဝင် သီချင်း စုစုပေါင်း 14 ပုဒ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Listen သီချင်းကိုတော့ American ရဲ့ Rock queen လို့ ပြောလို့ရတဲ့ Avril Lavinge က Featuring အနေနဲ့ သီဆိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Ambition album မှာလဲ American ရဲ့ နာမည်ကြီး Linkin Park ရဲ့ Mike Shinoda က Producer အနေနဲ့လည်း တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
I ran into @oneokrockofficial again but this time in ?? Canada. Makes me miss Japan even more then I already do ??❤. So fun hanging out with you guys tonight.
Linkin Park ရဲ့ Tour တော်တော်များများမှာလည်း Taka က သွားရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အခု နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ သီချင်းထဲမှာတော့ တစ်ပုဒ်လုံးနီးပါးကို english လိုရေးထားတာပါ။ Japan လိုပါတဲ့စာသားက နည်းပါတယ်။ သံစဉ်ကလည်း လုံးဝကို မြူးမြူးလေးပါ။ မိန်းကလေးတွေပါ နားထောင်လို့ရပါတယ်။ Rock ဆိုတိုင်း နားထောင်ရတာ နားညီးတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေ ကတော့ ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ စာသားလေးတွေကလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ စာသားလေးတွေမို့လို့ နားထောင်ကြည့်ပါလို့…။ ပြီးရင် အပေါ်မှာ Mention ပေးထားတဲ့ Ambition ထဲက သုံးပုဒ်နဲ့ Heartache လည်း နားထောင်ကြည့်ပါလို့ ။ လုံးဝကို ONE OK ROCK ကိုကြိုက်သွားမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ Music Video ကြည့်ဖို့ Link လေးလဲ ပေးထားတယ်နော်။
Music NewsRockrock band
PREVIOUS POST Previous post: တစ်ဝကြီးနားထောင်ရတော့မယ့် Bey နဲ့ Jay တို့ရဲ့ နှစ်ဦးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ album အသစ်
NEXT POST Next post: Taylor ရဲ့ London Reputation Tour ကိုသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ Cruz နဲ့ Romeo Beckham